Yiziphi Izinto Okufanele Uzivivinye Emikhankasweni Yakho Ye-imeyili? | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Septhemba 25, 2015 NgoMsombuluko, Februwari 7, 2022 Douglas Karr
Sisebenzisa inkundla yethu yokubeka ibhokisi lemiyalezo engenayo, senze uvivinyo ezinyangeni ezimbalwa ezedlule lapho saqamba kabusha imigqa yesihloko sencwadi yethu yezindaba. Umphumela wawumangalisa - ukubekwa kwebhokisi lemiyalezo engenayo kukhuphuke ngaphezu kuka-20% ohlwini lwembewu esiludalile. Iqiniso liwukuthi ukuhlolwa kwe-imeyili kuwufanele kakhulu ukutshalwa kwezimali - kanjalo namathuluzi okukusiza ukuthi ufike lapho.
Cabanga ukuthi uyilebhu ephethe futhi uhlela ukuhlola amakhemikhali amaningi ukuze uphume nefomula elungile. Kubukeka njengomsebenzi owesabekayo, akunjalo? Injalo nendaba nabathengisi be-imeyili! Ukulwela ukunakwa kwababhalisile ebhokisini labo lokungenayo kusho ukuthi udinga ukuthola indlela engcono yokuzibandakanya nabo. Kubalulekile ukuhlola izici ezahlukahlukene zokumaketha kwakho kwe-imeyili ukwandisa nokwakha isiteshi sakho se-imeyili.
Ukuhlolwa kwe-A / B - Uqhathanisa izinhlobo ezi-2 zokuguquguqukayo okukodwa ukukhomba inguqulo ekhipha okuvula kakhulu, ukuchofoza, kanye / noma ukuguqulwa. Eyaziwa nangokuthi ukuhlolwa kokuhlukaniswa.
Ukuhlolwa Kokunye - uqhathanisa izinhlobo ezingaphezu kwe-2 ze-imeyili ezinokuhlukahluka okuningi ngaphakathi komongo we-imeyili ukukhomba ukuhlanganiswa kokuguquguqukayo okuveza ukuvuleka okukhulu, ukuchofoza, kanye / noma ukuguqulwa. Eyaziwa nangokuthi iMV noma 1024 Variation testing.
Le infographic evela eqenjini elikhulu kuma-imeyili Monks isiza ukuhlela umehluko namandla we Ukuhlolwa kwe-A / B kuqhathaniswa nokuhlolwa kweMultivariate njengoba kuhlobene nemikhankaso ye-imeyili. Kuhlanganiswe nezinyathelo ezibandakanyekile ukuphatha i- ukuhlolwa komkhankaso we-imeyili, amasampula wokuthi ungazisetha kanjani izivivinyo zakho ze-A / B kanye ne-multivariate, izinyathelo ezithintekayo ukufika esiphethweni, kanye nezinto eziyi-9 okufanele zihlolwe:
Call to Action - usayizi, umbala, ukubekwa nethoni.
Ukwenza okuthandwa nguwe - ukuthola ilungelo lomuntu siqu kubalulekile!
Umugqa Wesihloko - hlola imigqa yezihloko zakho ngokubekwa kwebhokisi lokungenayo, amazinga wokuvula nokuguqula.
Kusuka kulayini - hlola inhlanganisela ehlukahlukene yomkhiqizo, ukushicilelwa, negama.
Design - qiniseka ukuthi kunjalo iyaphendula futhi iyesabeka kuwo wonke amaklayenti e-imeyili.
Isikhathi Nosuku - Ungamangala lapho abantu bevula ama-imeyili akho! Ukubathumela ukuthi balindele ukuhamba kwabo komsebenzi kungakhulisa ukuzibandakanya.
Uhlobo lokunikezwayo - Ukuhlukahluka kokuhlolwa kokunikezwayo kwakho ukubona ukuthi ikuphi okuguqula okuhle kakhulu.
Ikhophi le-imeyili - Izwi elisebenzisanayo eliqhathanisekayo futhi elifingqiwe, ukubhala okubhaliwe kuzokwenza umehluko omkhulu ekuziphatheni kwababhalisile bakho.
I-HTML iqhathaniswa nombhalo ongenalutho - Ngenkathi ama-imeyili e-HTML eyilaka lonke, kusenabantu abafunda umbhalo ocacile. Banikeze isibhamu bese ubheka impendulo.
Ezinye izinsizakusebenza ekuhlolweni kwe-imeyili
Ama-Kissmetrics - Umhlahlandlela Wabaqalayo Ekuhlolweni kwe-A / B: Imikhankaso Ye-imeyili Eguqula
CrazyEgg - Ukuhlolwa kwe-imeyili A / B kwe-6 Ongakuqhuba Namuhla (Futhi Thola Imiphumela)
Tags: usuku oluhle lokuthumela i-imeyiliisikhathi esihle sokuthumela i-imeyiliukuhlolwa kwe-imeyili a / bukubizelwa esenzweni nge-imeyiliukuhlolwa komkhankaso we-imeyiliikhophi le-imeyiliukuhlolwa kwekhophi ye-imeyilii-imeyili ctaukwakheka kwe-imeyilii-imeyili infographicimeyili indelaizindela ze-imeyiliukuhlolwa kwe-imeyili okuhlukahlukeneukuhlolwa kokunikezwa kwe-imeyiliukunikezwa kwe-imeyiliukwenza ngezifiso i-imeyiliumklamo ophendulayo we-imeyiliukwakheka kwe-imeyili okungashabalaliimigqa yezihloko ze-imeyiliukuhlolwa kwe-imeyiliisikhathi se-imeyili nosukuama-imeyilihtml kuqhathaniswa nombhalo
Imeleni i-API? Namanye ama-Acronyms: REST, SOAP, XML, JSON, WSDL
Ngo-Apr 17, i-2015 ku-1: 28 AM
Ngiyabonga kakhulu ngokwabelana ngale Doug! Siyabonga ngokusekela kwakho ngomusa.